Mitondra Fitahiana ny Fankatoavana - Thomas S. Monson
Mitondra Fitahiana ny Fankatoavana
Nataon’ny Filoha Thomas S. Monson
Tonga eo amintsika ny fahalalana ny fahamarinana sy ny valin’ireo fanontaniana lehibe ananantsika rehefa mankatò ny didin’Andriamanitra isika.
Ry rahalahiko sy anabaviko malala, feno fankasitrahana aho miaraka aminareo amin’izao maraina izao. Mangataka ny finoanareo sy ny vavakareo aho eto am-pamaliako ny fanomezana ahy tombontsoa manokana hiresaka aminareo.
Nikatsaka fahalalana sy fahatakarana nandritra ny taona maro mikasika ity fiainana an-tany ity sy ny anjara toerana misy azy ary ny tanjon’izy ireo ao anatin’izany ny lehilahy sy ny vehivavy, anisan’izany koa ny fikatsahana ny lalana ahazoana fiadanana sy fahasambarana. Isika tsirairay avy dia samy mikatsaka ireo zavatra ireo.
Afaka mahazo io fahalalana sy fahatakarana io avokoa ny olon-drehetra. Voarakitra ao amin’ireo fahamarinana mandrakizay izy ireo. Hitantsika ao amin’ny Fotopampianarana sy Fanekempihavanana fizarana 1, andininy 39 ny hoe: “Fa indro, ary jereo, ny Tompo no Andriamanitra, ary ny Fanahy dia vavolombelona manambara, ary marina ny fanambarany, ary ny fahamarinana dia mitoetra mandrakizay.”
Nanoratra toy izao ny mpahaitononkalo malaza iray:
Na dia manjavona aza ny lanitra ary mitroatra ireo loharano eo amin’ny tany,
Ny fahamarinana, izay antom-pisiana, dia handresy ny ratsy indrindra mety hitranga,
Tsy manam-piafarana, tsy miova, mandrakizay.1
Mety hanontany ny sasany hoe: “Aiza no ahitana ny fahamarinana toy izany, ary amin’ny fomba ahoana no hamantarantsika izany?” Tao anatin’ny fanambarana izay nomena tamin’ny alalan’ny Mpaminany Joseph Smith tao Kirtland, Ohio, tamin’ny Mey 1833, dia nanambara ny Tompo hoe:
“Ary ny fahamarinana dia fahalalana ny zavatra araka ny maha-izy azy, sy araka naha-izy azy ary araka ny haha-izy azy. …
“Ny Fanahin’ny Fahamarinana dia avy amin’Andriamanitra. …
“Ary tsy nisy olona nandray ny fahafenoana, raha tsy mitandrina ny didiny izy.
“Izay mitandrina ny didin[’Andriamanitra] dia mandray fahamarinana sy fahazavana ambara-pahatonga azy hankalazaina ao amin’ny fahamarinana sy hahafantatra ny zava-drehetra.”2
Fampanantenana lehibe tokoa izany. “Izay mitandrina ny didin[’Andriamanitra] dia mandray fahamarinana sy fahazavana ambara-pahatonga azy hankalazaina ao amin’ny fahamarinana sy hahafantatra ny zava-drehetra.”
Tsy ilaintsika sy ianao amin’izao andro ananana fahalalana betsaka izao, rehefa naverina tamin’ny laoniny ny fahafenoan’ny filazantsara, ny mikaroka ny fahamarinana amin’ny fomba sarotra sy tsy mbola nisy nanao mihitsy teo aloha. Nanoritra ny lalantsika sy nanome mpitarika mahatoky—dia ny fankatoavana ny Ray any an-danitra be fitiavana. Tonga eo amintsika ny fahalalana ny fahamarinana sy ny valin’ireo fanontaniana lehibe ananantsika rehefa mankatò ny didin’Andriamanitra isika.
Mianatra mankatò mandritra ny fiainantsika isika. Ireo tompon’andraikitra tamin’ny fikarakarana antsika, nanomboka tamin’ny fiandohan’ny fahazazantsika, dia nametraka torolalana sy fitsipika mba hiarovana antsika. Ho tsotra kokoa ny fiainantsika rehetra raha hankatò tanteraka ny fitsipika toy izany isika. Maro amintsika anefa no mianatra amin’ny alalan’ny zavatra iainana izany hoe, fahendrena ny mankatò.
Rehefa nihalehibe aho dia nipetraka tao amin’ny trano fialan-tsasatray tany Vivian Park ao Provo Canyon ao Utah izahay isaky ny fahavaratra manomboka ny fiandohan’ny volana Jolay ka hatramin’ny Septambra.
Ny iray tamin’ireo namako akaiky indrindra nandritra ireo andro fialan-tsasatra ireo tany amin’ilay faritra ahitana haram-bato mijoalajoala dia i Danny Larsen, ary nanana t